Amazon Hearing Aids | Hearing Aids Supplier
Hearing Amplifiers Aids Rechargeable kune Vakuru vane Inotakurika USB yekuchaja Bhokisi Pachako Inonzwa Ruzha Amplifier Hearing Aid Inotaridzika Senge Earbuds 2 Pack (Ichena)
Category: ITE Kunzwa Aids
SKU : JH-A39
YAKABANDUDZWA VERSION: Yakagadziridzwa neMoving-iron speaker iri nani, sutu yekutadza kunzwa zviri pakati nepakati. Mafashoni Earbuds dhizaini, taurirana pasina kunyara.
ZVINYORE KUSHANDISA: Iine bhatani hombe repombi, Kapfupi pombi yeVolume control (Mavhoriyamu: 1-2-3-4-5-6), Tora refu 3s yekubatidza/kudzima.
RECHARGEABLE: Maawa gumi ekushandira ruzha amplifier. 10 kusvika 3 nguva yekuchaja ine portable kesi. USB Charge Bhokisi, Diki uye kubhadharisa chero kupi, chero nguva. Hapana chikonzero chekutsiva mabhatiri madiki, anodhura.
GIFT DESIGN: Yedu yekudzokorora kwekunzwa amplifera inopiwa nemafaro ekutakura uye zvizere zvinhu. Chipo chikuru chemhuri yako neshamwari.
HASSLE-FREE WARRANTY: Tine nyanzvi uye murwere mushure mekutengesa timu.1 Year Manufacturer Warranty, 3 mwedzi Hassle Free Return policy. Sarudza isu tive nechokwadi chekuti kutenga-isina njodzi kune vese vatengi.
Tenga pa Amazon
Hearing Aid Amplifier Inochajwazve Kune Vakuru Vakuru vane Auto Power On & Off, Personal Sound Amplifier Devices 2-Pack ine Magnetic Contact Inotakurika Kuchaja Bhokisi.
SKU : JH-A610
[Mu-Nzeve Kuonekwa Dzivisa Kuchema] Nekushandisa zvizere-nyowani-munzeve kuona, maamplifiers anonzwa paunoaisa mugero renzeve yako wobatidza, uye wodzima otomatiki kana angobviswa. Woonekana nekuchema, kukupa kunzwa kwakanakisa kwekuteerera.(*Cherechedza: Usabate panoonekwa nzeve nemaoko ako)
[Super Fast Charge] Paunokanganwa kuchaja mahedhifoni uye nekuchimbidza unofanira kushandisa. Usanetseke, ingovabhadharisa maminetsi gumi nemashanu ipapo unogona kuwana 15 maminetsi enguva yekutamba. Mushure mekubhadhara kwemaawa maviri nemhosva yekuchaja, rubatsiro rwekunzwa runogona kushanda kwemaawa 180-2, uye kushandiswa bhokisi rekutengesa rinogona kuwedzerwa kusvika 12h.
[Big Bhatani Kushanda] Kusvikira ku190 ° batidza knob yekugadziridza kuti ugadzirise vhoriyamu, Ingoibvisa woitenderedza kuti igadzirise, kushanda kuri nyore. Sangana nenzvimbo dzakasiyana (dzakanyarara/ dzine ruzha/Kunze)
[Dzaini Yakagadzikana] Chete 3g. Iyo ergonomic JINGHAO yekunzwa amplifier inogona kuve yakagadzika kugadzikana, inozvitutumadza IP53 Mvura & Dust Resistance, uye yakareruka dhizaini inovimbisa kuti hauzonzwe kuneta kunyangwe uchiteerera kwenguva refu. 3 shape earplugs akakodzera vanhu vakasiyana.
[Yakanakisa Mushure meKutengesa Sevhisi] Kunetseka-Yemahara 12 Mwedzi Warranty, Kana uine chero mibvunzo, ndapota taura nesu, isu tinokupa iwe yakanakisa sevhisi yevatengi pasina kunetsekana!
JH-D59 Rechargeable BTE Hearing Aids
Category: BTE Kunzwa Aids
ZVINOGONESESA: Maawa makumi maviri achishandira gudzazwi. Maawa maviri kuchaja nekesi inotakurika. Charge chero nguva uye chero kupi. Hapana chikonzero chekutsiva iwo madiki, anodhura mabhatiri.
Zvakareruka Kushanda: Inongoda bhatani bhatani kuti ushandure pakati pemamodhi matatu (Zvakajairika / Ruzha / Runhare). Iyo zvakare ine basa rekurangarira marongero. Iyo modhi uye vhoriyamu yakashandiswa nguva yekupedzisira icharamba ichishandiswa nguva inotevera kana iwe ukaibatidza.
Nyore KUSHANDISA: Chete 2 mabhatani anotonga Long kwenguva ”M” 3 masekonzi kubatidza / kudzima. Pfupi pinda "M" yekugadzirisa modhi. Pfupi pinda Vhoriyumu Bhatani yevhoriyumu +/-, hapana chikonzero chekuibvisa.
INISISIBLELE DESIGNED: Iwo epamoyo maamplifaya idiki, akangwara uye mini yakakwana kuti ive mune isingaonekwe kuseri kwenzeve.
YAKAKWANA PASHURE-SALES SERVICE: Isu tinopa Mazuva makumi matatu emari-kudzoka, 30 gore mugadziri warandi uye risingaperi vatengi. Kana paine chero dambudziko, unogona kubata vatengi vedu.
JH-A32 Hearing Amplifiers Aids RechargeableDigital Hearing Inobatsira Ruzha Chishandiso chine Maikorofoni Maviri Noise Kudzima Digital Signal In-Ear Detection.
SKU : JH-A32
KUNZWA ZVAKANAKA UYE ZVINONYORWA: Aya maamllifiers anobatsira ane hunyanzvi hwekuita maviri maikorofoni uye chinhu chekudzikisa ruzha, chinobatsira kukwidziridza nekujekesa manzwi uku uchideredza ruzha rwekumashure. Inogona kukupa yakanakisa ruzha mhando uye usambofa wakakurega uchipotsa chero chinhu.
AUTO BOOT KUDZORERA MARIRO: Iise munzeve, wobatidza, wodzima otomatiki kana yangobviswa, ipfeke pasina kuridza muridzo. 4 chiteshi Dhijitari chiratidzo chekugadzirisa nekudzikisa ruzha, ipa yakajeka ruzha.
FASHION UYE ERGONOMIC DESIGN: Yakagadzirwa zvakanaka, senge bluetooth earphone. IPX4 Mvura inodzivirira, yakagadzikana, ergonomic inokodzera zvakananga munzeve, unogona kupfeka zvakanaka mudziyo kwenguva refu pasina kusagadzikana.
TEERERA UYE KUSVIRA KUCHAJA PASI POSE: 15min nokukurumidza kuchaja, 3H nguva yekushanda; 2H yakazara kuchaja, Kusvika ku15H nguva yekushanda. 3 times rechargeable nepo charge case yakazara. Hapana chikonzero chekutsiva mabhatiri madiki, anodhura. Chaja chero nguva uye chero kupi. Yakanakira kushandiswa.
AFTER-SALES SERVICE: Imwe neimwe inodzokororwa yekunzwa yekubatsira inouya neyakanakisa mushure mekutengesa sevhisi, zvinoreva kuti kana uine chero nyaya nezvechigadzirwa ichi unogona kutibata isu kuti uwane mhinduro, isu tinokupa yakanakisa yekutenga chiitiko pasina kunetsekana!